तीर बनि बसे यो दिलैमा’ ‘के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कोसेली भनेर
‘लोलाएका ती ठूला, तिम्रा दुई नजरले, हेरिदिए मलाई चाहिन्न अर्को केही’
कुनै पनि मुलुकमा गएर उनीहरूको लोकप्रिय गीत विदेशीले गाइदियो भने स्रोताले असाध्यै मनपराउँछन् भन्ने जंगमलाई राम्रोसँग थाहा थियो। त्यसमाथि पाकिस्तान पुगेपछि उताका आयोजकहरुले सकभर नृत्यभन्दा गायनमै बढी जोड दिन अनुरोध गरे। ‘सक्नुहुन्छ भने हाम्रा गीत पनि गाइदिनु होला’ भनेपछि जंगमका आँखा टलक्क टल्किए। उनले मेहदी हसनको एउटा सिंगो अल्बमका गीतहरु कण्ठस्थ पारिसकेका थिए।
‘भेट्नुअगावै उहाँले मेरो सम्पूर्ण जानकारी लिइसक्नुभएको रहेछ,’ जंगम भन्छन्, ‘त्यति उच्च गायकमा मप्रतिको हार्दिकता देखेर चकित भएँ।’ संगीत र अझ गजलका मामलामा खानदानी महासागरको छेउमा पुगेपछि जंगमसँग सोध्नुपर्ने कुरा धेरै थिए। जान्नुपर्ने जिज्ञासा अनेक थिए। त्यसैले दिनभरि नै हसनको घरमा दुई जनाबीच कुराकानी भए। हिँड्ने बेला जंगमले बेलुकीको कार्यक्रम निम्ति निम्तो दिए। हसनले पनि ‘म तपाईंको गीत सुन्न आउँछु’ भने। बेलुकी त मेहदी हसन आफूमात्र होइन, कराँचीका एकसेएक वरिष्ठ सञ्चारकर्मी र संगीतज्ञहरुको लश्करै लिएर पुगेछन्। कार्यक्रमको अन्तिमसम्मै बसे र हिँड्नेबेला अंगालो मारेर धन्यवाद दिए। ‘त्यो घटनाले मभित्र ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो,’ जंगम भन्छन्, ‘मजस्तो संगीतमा लाग्नुपर्ने मानिसका निम्ति त्यसले ठूलो आत्मविश्वास जगाउनु स्वाभाविक थियो।’ लगत्तै फेरि लाहौरमा कार्यक्रम रहेकाले भोलिपल्टै टोलीले कराँची छाड्यो। र, त्यो भेट त्यतिमै सीमित भयो।
आफूले रेकर्ड गर्न नपाए पनि महेन्द्रकै गीतलाई जंगमकै संगीतमा पाकिस्तानी आवाजले सिँगार्ने अठोट मेहदी हसनले लिएर फर्के। जंगमका अनुसार निकै पछिसम्म पनि मेहदी हसनले अन्तर्वार्ताहरुमा नेपालको उल्लेख गरेका थिए। त्यसको डेढ वर्ष नबित्दै काठमाडौंमा अर्का महान गजल गायक गुलाम अली आइपुगे। ‘त्योबेला राजनीतिक तवरबाट एकातिर सार्क स्थापनाका तयारीले तीब्रता पाइरहेको थियो,’ जंगम सम्झन्छन्, ‘अर्कातर्फ नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेशका बीचमा साँस्कृतिक आदानप्रदानका गतिविधि धमाधम अघि बढिरहेका थिए।’
जुन पार्टीमा गुलाम अलीले जंगमलाई त्यसो भनेका थिए, त्यसपछिको चार दिन मात्र उनको बसाइँ काठमाडौंमा हुँदै थियो। त्यसमाथि तीन दिन त कन्सर्ट नै थिए। यति छोटो अवधिमा भ्याउन कसरी सम्भव हुन्थ्यो?
त्यतिबेला जंगमलाई आँट दिलाउने दुईवटा कुरा मात्र थिए। एक, यस्तो अवसर जीवनमा विरलै मिल्छ भन्ने चेत। अर्को, त्यतिबेला रत्न रेकर्डिङ संस्थानको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको कुर्सीमा आफैं विराजमान हुनु। त्यो स्वागत पार्टीमा गुलाम अलीले जंगमलाई दुईवटा गीत तयार पारेर भोलि नै ११ बजे आफू बसेको एभरेष्ट होटलमा आइपुग्नु भनेका थिए। पार्टीबाट घर फर्किंदा नै एघार बजिसकेको थियो। अर्थात् उनीसँग अब केवल १२ घन्टा थियो। त्यसै बीचमा सुत्नु पनि पर्ने र भोलि बिहानै पद्मकन्या क्याम्पस पुगेर पढाउनु पनि पर्ने। कसरी सम्भव होला?
‘तै मसँग मविवि शाहका गीतहरुको किताब थियो,’ जंगम भन्छन्, ‘पार्टीबाट फर्किने बित्तिकै काममा जुटेँ।’ सबैभन्दा पहिले छानिएको गीत थियो ‘लोलाएका ती ठूला, तिम्रा दुई नजरले’। अलीको गायकी र शैली हेरेर जंगमले त्यसमा सेमी क्लासिकल र गजलको स्वाद मिसाएर कम्पोज गरे।
टाँसिरहन पाए, चाहिन्न अर्को केही’ ‘लौ हेर्नुस् न, कति मिठोसँग एउटा सिंगो इमेज र क्यारेक्टर उभ्याइएको छ त्यहाँ,’ थपे, ‘मैले त्यो राति साढे दुई नबज्दै यो गीतको संगीत तयार पारिसकेको थिएँ।’
हार्मोनियम बन्द गरे र सरासर होटलतिर लागे। साढे ११ बजे गुलाम अलीसँग भेट भयो। गीत सुन्नेबित्तिकै अभ्यासमा लागिहाले। एक ठाउँमा चाहिँ उनलाई टिप्न अलिक अप्ठेरो भएछ। ‘सौभाग्यशाली औँठी तिम्रो त्यो हातको भई
यो दोश्रो गीतमा चाहिँ गजल परम्पराभन्दा फरक नेपालमा चल्तीको ‘ट्रेण्ड’ पछ्याएको जानकारी उनले अलीलाई दिए। ‘ए यहाँको कलर यस्तो छ?’ अलीले भनेछन्, ‘एकदम ठीक छ। मलाई त यो मनपर्यो।’
भोलिपल्ट नै रेकर्डिङको निम्ति योजना तय भयो। रत्न रेकर्डिंगसँग आफ्नै स्टुडियो थिएन। त्यसैले रेडियो नेपाल बुक गरियो। म्युजिक एरेन्जमेन्टको जिम्मा संगीतकार शुभबहादुर सुनामलाई दिएपछि सम्पूर्ण वाद्यवादन युनिटको झन्झट बोकिरहनै परेन। ‘तै संयोगले त्यतिबेला खाँ साहेबसँग सुफी गायिका आविदा परवीन पनि आएकी थिइन्,’ जंगम भन्छन्, ‘यता गीत रेकर्ड भइरहँदा उता कन्सर्टमा आधा भाग आविदाले गाइदिने हिसाबले समय मिलाएका थियौं।’
त्योबेला अहिलेको जस्तो मल्टी ट्रयाक सिस्टम थिएन। एकैपटकमा सिंगो गीत रेकर्ड गर्नुपथ्र्यो। ‘यस्तोमा उता आविदाले गाइसकेर खाँ साहेबको पालो आइसकेको छ,’ जंगम भन्छन्, ‘यता रेकर्ड ओके भएकै छैन।’ त्योबेला एउटा सानो गल्ती हुनेबित्तिकै फेरि सुरुदेखि रेकर्ड थाल्नुपर्थ्यो। साह्रै दबाब आएपछि जे पर्ला पर्ला भनेर जंगमले ठूलै जोखिम मोले। ‘काटकुट पारेरै भए पनि काम लिन्छु भन्दै एकैपटक दोश्रो अन्तराबाट रेकर्ड सुरु गराएँ,’ उनले भने, ‘त्यो एनालगको जमानामा अलिकति पनि तलमाथि भइदिए सिंगो रेकर्ड गरेको गीतै ध्वस्त हुन्थ्यो। तै पनि मसँग विकल्प थिएन।’ यसरी हतारमा गरिएको रेकर्डिंङकै कारण यस्तो जोखिम दुईवटा गीतमा उठाउनुपरेको थियो।
भोलिपल्ट सम्पादनको टेबलमा बस्दा भने जंगमले तिरिमिरि झ्याइँ देखे। पहिलो टेक बिग्रिएको थियो भने दोश्रोमा पनि एक ठाउँ गुलाम अलीको आवाज फाटेको थियो। फेरि रेकर्ड सम्भवै थिएन। अब के गर्ने? फाटेको स्वर जस्ताको त्यस्तै राखेर गीत प्रसारण लायकै हुँदैन थियो। ‘त्यसपछि एउटै उपाय थियो,’ जंगमले सुनाए, ‘त्यो फाटेको स्वरलाई त्यहीँ भित्रको आवाज प्रयोग गरेर जसरी भए पनि थिचथाच पारिदिनु।’
साउन्ड इन्जिनियरले मान्दै मानेनन्। ‘बिग्रे बिग्रन्छ। मेरो यत्रो मेहनत परेको चिज हो। म जोखिम मोल्छु,’ जंगमले पनि अड्डी लिए।
‘हो,’ जंगमले भने, ‘एकदम सही कुरा।’ त्यसो भए त्यहाँनिर आलाप राख्ने निर्णय कसले लिएको थियो?
‘नगरौं,’ गुलाम अलीले निधार खुम्च्याउँदै जवाफ दिएछन्। जंगमले पनि अनुरोध गरिरहन छाडेनन्। यसरी भनसुन भइरहँदा त्यहाँ पाकिस्तानबाटै आएका ‘ग्रुप डाइरेक्टर’ पनि थिए। ‘यो त ठीक छ नि, के भो त?’ जंगमले तयार पारेको आलाप सुनिसकेपछि उनले गुलाम अलीलाई सम्झाएछन्, ‘सिर्जना गरिरहेको मानिसले कहाँ के कसरी गरिरहेको छ त्यसलाई तपाइले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ।’
‘त्यतिबेला मैले यस्तो मानिस भेटेको थिएँ जसबाट जुनसुकै काम पनि लिन सकिन्थ्यो,’ जंगम भन्छन्, ‘निरन्तर उचा हस्तीहरुसँग काम गर्न पाइरहेका मानिसको सिर्जना त्यही भएर त स्तरिय हुन्छन्।’ हो त। हामी सामान्य गायकको कुरै गरिरहेका थिएनौं। खूद नारायणगोपालले समेत एकसमय नेपाली प्रेससँग आफुलाई सबैभन्दा मनपर्ने गायक भनेर बताएका गुलाम अली पो थिए।
कुनै समय तत्कालीन राजा महेन्द्रले लेखेका गीतलाई उतिबेलै रेडियोमा अरु नै गायकबाट रेकर्ड गरिएको थियो र उतिबेलै यी गीतहरु हराइसकेका पनि थिए। तर, जंगम र गुलाम अलीको प्रयासले पाएको दोश्रो जीवन कैयौं गुणा बढी प्रभावकारी बन्न पुगे। ‘पञ्चायतकालमा यस्तो काम गरेपछि दरबार त निकै खुसी भएको थियो होला नि?’ मैले सोधेँ।
उनका अनुसार यो गीत रेकर्ड भएको लगत्तै पदावधि सकिएर उनी रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट बाहिरिए। त्यसपछि आजसम्म कुनै पनि सरकारी ओहोदामा पुग्ने वा अन्य कुनै लाभ लिने काम उनले गरेकै छैनन्। ‘आजीवन कलेजमा पढाएरै बिताएँ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खरै अवकाश पाएको छु।’
सत्ताको नजिक रहेकालाई जथाभावी नियुक्ति दिने काम त्यो समयमा अहिले जस्तो नरहेको जंगम प्रस्ट पार्छन्। उनले एकैछिन निधार खुम्च्याएर सोचेपछि पुरानो याद निकाले। ‘बरु मलाई एकपटक मुमा बडामहारानी रत्नका नजिक रहेका व्यक्तिले चाहिँ सम्पर्क गरेका थिए,’ उनले भने, ‘संगीतमा पनि लगाव रहेका ती मानिसले मलाई ‘मुमा बडामहारानीले तपाईंको काम साह्रै मनपराउनु भएको छ’ भनेर सुनाएका थिए।’
सोमबार, पौष १८, २०७३ १३:५३:३१